Dimuqraadiyada tooska ah ka toosi xiritaanka iyo soo kabashada dhaqaalaha: Martin Vrijland
Dimuqraadiyadda toos uga toosi xirida iyo soo kabashada dhaqaalaha
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 15 May 2020	• 24 Comments
Dimuqraadiyadda tooska ahi waa xalka ka dhashay argagaxnimada hadda ka jirta ee ay dawladda Dutch-ka ku soo rogtay dalkeena. Waa qaab dimuqraadiyadeed oo dadku ay si toos ah ugu doortaan wakiiladooda iyagoo u maraya codeynta khadka tooska ah (sugan). Dadka dib u habeynta iyo tayada hogaaminta ayaa loo codeeyaa. Qofka codadka ugu badan ku guuleysta jagada wasiirnimo. Isla sidaas ayaa loo doonayaa ra'iisul wasaare.
Sharciyada waa in dib loo eegaan oo dadka loosoo bandhigo ereybixin fudud oo fudud si loogu oggolaado ama loo diido. Shuruucda waxaa la siiyaa taariikhda dhicitaanka waana la codeyn karaa ama si otomaatig ah dib loo cusbooneysiin karaa marka taariikhdaas ay dhacdo. Sharci wanaagsan ayaa jira. Sharci xumo ayaa baaba'aysa.
Waxaad dhisi kartaa dimoqoraadiyad toos ah inta dowladda hada jirta ay wali jirto. Waa qaab caqli-gal ah oo iska caabin ah oo markiiba noqon kara mid la taaban karo. Kacaan xasilloon oo deg deg ah. Kama sugtid doorashooyinka, laakiin waxaad doorashadaada toos ugu abaabushaa khadka tooska ah.
Waxay isla markiiba noqon kartaa mid la taaban karo, sababta oo ah waxaad ilaalisaa qaab dhismeedka bulshada ee jira, laakiin waxaad ku beddeshaa hoggaanka adigoo u maraya codeynta khadka tooska ah. Xaashiyaha yar yar ee taajka waxaa beddelaya maareeyayaal ka socda dadka.
Nidaamyada doorashada ee amniga sugaya oo xukuma doorashooyinka doorashada ayaa jira. Way fiicnaan lahayd in tan lagu sameeyo iyada oo loo marayo blockchain ama iyada oo loo maro isku xirka DigiD, laakiin sababta oo ah waa in aannaan ka fileynin in dowladda ka imaneysa ay iskaashi la sameyso, tan ayaan diyaarin karnaa tan. FVVD waxay horeyba u siineysaa masaladan tan (www.fvvd.nl).
Warqadda hoos ku qoran ayaa si faahfaahsan u sharxaysa waana warqad silsilad ah oo aad si toos ah ugu diri kartid saaxiibbadaa ama kuwa aad isbarteen:
Si kooban oo ku saabsan dowladda hadda jirta iyo "xannibaadda caqliga leh" ee aan ka wada hadalnay.
Tartiib tartiib, aaggayaga, dad aad u tiro badan ayaa bilaabay inay arkaan in dawladdu ay rabto inay wax ka badasho guud ahaan bulshada. “Qabashada caqliga leh” ayaa si tartiib tartiib ah loogu beddeli doonaa mid joogto ah, halkaas oo ay tahay inaad dib ugu soo ceshato xorriyaddaada. Caadiga ah ee cusub wuxuu noqonayaa hal mitir iyo badh bulshada waana inaad adigu iska bixisaa. Waan ku daalay taas.
Dhageyso, Shirkaduhu waxay hadda kireysan karaan la taliyayaal qaali ah si ay talo uga helaan sida ay u aasaasaan ganacsigooda lix fuudh. Waxaad khiyaameyneysaa inuu jiro sumad qiimo ku lifaaqan taas; sumadda qiimaha shirkadda (maxaa yeelay waxay u baahan doontaa oggolaansho rasmi ah oo loogu talagalay 1,5-mitir cabbir ah) iyo sumad qiimo loogu talagalay macaamisha (maxaa yeelay qof waa inuu qufacaa mitirkaas khasabka ah hal-iyo-badh-badhka iyo dakhliga soo gala).
Waxay u badan tahay in tallaalka soo socda ee'vidvid-19 'uu si fudud u noqonayo mid khasab ah. Maxay kula tahay arintaas?
Maxaad u maleynaysaa ... Marka laga reebo su'aasha ah in tallaalkan oo kale la tijaabiyey iyo in kale, iyo si la mid ah su'aasha ah in aan rabno iyo in kale hal mitir iyo bar mitir bulshada. Waxaan u malaynayaa in Rutte ay tahay qof adkeysi badan oo aan dhagaysanaynin dadka mudaaharaadaya ee jooga Hague.
Ma aqaano waxaad ka aaminsan tahay waxaas, laakiin teknoolojiyadda ayaa loo isticmaali doonaa si loola socdo dhammaan tallaabooyinkaas. Teknolojiyaddaas iyo xog ballaaran ayaa imaan doona uun, maxaa yeelay waxaa jira shirkado aad u tiro badan oo mar labaad ku kasban kara bey'ad xiiso leh. Mise si kale ayaad u aragtaa? Waxaan u malaynayaa in dad badani ay mar horeba u shaqeeyaan shirkadaha waaweyn ee bixiya xallinta ICT ama hayadaha dawladda ee hubiya inay sii wadi karaan bixinta lacagta gurigooda isla markaana ilaalinaysa qoyskooda. Dadkaas ayaa laga yaabaa inay u arkaan wax aan sax ahayn, laakiin markay tahay doorashada, dadka badankood waxay doortaan gurigooda iyo beertooda.
Aniga iyo aniga runtii waan ognahay waxa bulshadaan cusubi u egtahay. Saxaafadda iyo dawladduba waxay sii wadaan inay rumaystaan ​​in iibinta ay lama huraan tahay iyo sida loogu soo bandhigo waa talaabo talaabo ah, si ay dadka badani u sii wadaan inay rumeysan yihiin inay runtii lagama maarmaan tahay in la xakameeyo fayraska corona. Taasi farxad iguma aha.
Adiga ayaa sidaa yiri In howshu ka sii socon doonto dhaqdhaqaaqa mowjadda laga bilaabo 'adkeynta suunka' ilaa 'kaliya u daa ha dayrta' ka dibna mawjadda xigta ay timaaddo. Muddo ka dib markii la baranayay hal mitir iyo badh iyo qol aad u badan oo loogu talagalay socodka, warbaahinta, khubarada (soosaarka tirooyinka RIVM) iyo siyaasiyiin ayaa na tusi doona soo nooleynta fayraska corona, ka dib taas oo soo bandhigista qaybta dambe ee xirmo ay qaadan doonaan dadka.
Hagaag, ma xasuusto hadaad sidaas dhahday, laakiin dad aad u tiro badan ayaa ogaanaya macluumaad ku saabsan sida aan u ciyaareyno (marka laga reebo dhamaan wararka been abuurka ah). Waxaan ka ogaan karnaa wax badan oo ku saabsan sida halista tallaalku, sida patent Microsoft uu doonayo inuu noo siiyo shahaadada tallaalka dijitaalka ah, sida Bill Gates u maalgeliyo warbaahinta iyo warshadaha tallaalka, sida barnaamijyada loo adeegsan karo si loola socdo. Waxaan u maleynayaa in si dhaqso ah loogu riixayo nidaamka isugeynta dijitaalka ah. Waxaan u malaynayaa in macluumaadku aad u muhiim yahay, sababta oo ah hadaadan ogayn khatarta kugu soo foodleh, kama boodboodo waqtiga. Si kastaba ha noqotee, waa in tallaabo xigta la qaado. Waa inaan la imaanaa xalka.
Waxaan u malaynayaa hadaan adiga iyo anagu waxba sameyn, waxaan u gudbi doonnaa bulsho aan lacag badan haysan, mujtamac ay barnaamijyadooda, kamaradaha iyo xog weynaha ay sifiican u ogaadaan meesha aan joogno ama aan heer kulka saxda ah ka leenahay (no covid-19) iyo cidda aan wada shaqeyno. Tallaabada xigta waa in lagu xiraa dhammaan xogtan qaab nidaam dhibco ah. Ma sugaayo taas, ma aniga? Markaad haysato ama aan lahayn dhibco kugu filan, waad ka bixi kartaa ama ma bixi kartaa dibadda, tareenka ama diyaaradda ama wixii la mid ah. Taasi waxay noqon doontaa guri waalli ah! Isku xirka dhammaan xogtaas oo ah calaamadaha dhijitaalka ah ee suurtagalka ah iyo isku xirka dheelitirkaaga bangiga dhijitaalka ah waa wax aad u fiican. Nooca xabsi furan.
Waxaan u maleynayaa in naloo kaxeeyo shabakad, Shiinahana wuxuu bixinayaa tusaale ah sida dowlad ahaan aad dadka ugu qasbi karto inay u hoggaansamaan. Ma doonayo inaan ku noolaado Shiinaha. Shiinaha ayaa sidoo kale muujinaya sida shaqsiga mucaaradka u taagan in si fudud looga tago. Taasi waa saameynta tooska ah ee nidaamka noocan ah. Mise si kale ayaad u aragtaa? Ugudambeyntii, dadweynihii ayaa mar kale sujuudaya, qayb ahaan sababta oo ah in badan oo bulshada ka mid ah laftooda ayaa u shaqeeya qaybo ka mid ah 'nidaamka'. Haddii aad ka shaqeyso IT oo aad soo bandhigto softiweer keydka kombuyuutarka ama aad keentid nidaamyada kamaradaha, haddii aad u shaqeyso sarkaal dambi baaris ama sarkaal booliis ah, wali waxaad dooranaysaa dakhligaaga. Taasi waa habka ay u socoto.
Dhawaan qof ayaa yiri: "Markaas ayaan iska tuurayaa taleefankayga casriga ah si aan nidaamka uga baxo". Laakiin waxaan u soconaa waqti ay ka qeybqaadashada bulshada ay ku noqoneyso wax aan suurta gal aheyn iyadoo aan qotodheer la sameynin ama aan lahayn hay'ad shaqsiyeed (shirkadaha). Taasi horeba waa kiiska. Isku mid ayaa ku dhici doona tikniyoolajiyadda corona-ga cusub. Hadaad tuurid taleefankaaga casriga ah, ma awoodi doontid inaad gasho supermarket-ka. Markaa waxaad tahay uun saxarada.
Ma u malaynaysaa inay taasi ku dhici doonto? Waxaan u maleynayaa sidaas ... Markaas ka dib waad noolaan kartaa haddii aad leedahay jardiinada aad iska leedahay, laakiin markaa waa inaad sidoo kale ka soo heshaa abuurkaaga, maxaa yeelay isku filnaanshahaas ayaa waliba laga mamnuuci doonaa muddada dheer. Hagaag, anigu kama aqaano adiga, laakiin waqti uma lihi taas mana dareemayo sidaan oo kale.
Waxaan u maleynayaa in tallaabada xigta ay noqon doonto inaadan ku sii jiri doonin goobaha bulshada haddii aadan tallaal qaadan. Iyo in “data weyn” ay u badan tahay inay sidoo kale door ka ciyaari doonto tan. Haddii barnaamij noocan oo kale ahi mar dambe dhaho inaad qaadatay tallaal, irridda laga soo galo supermarket-ka ayaa kuu oggolaanaya inaad soo gasho; haddii kalese. Marxaladda ugu dambeysa, app noocan oo kale ah waxaa badali doona dabeecad dijitaal ah oo ku xiran jirkaaga ama wax. Ma ogi, waxaad maqlaysaa in Microsoft ay ku shaqeyso iyada oo leh patent ama wax (ma ahan shirqool, waxaan ka aqriyaa goobta Google). Wayna dhameystiri doontaa oo keliya haddii ay sidoo kale isku xiraan dheelitirkaaga bangiga dhammaan waxaas oo dhan. Brrrr .. Mar dhow ma jiri doontid baxsi ilaa aad dooratid inaad ku noolaato 'duurjoogta', laakiin waa maqaa ..
Waan qaylin karnaa waxaan rabno; Waxaan ka qaylin karnaa inaanan dooneynin dhammaantood, laakiin waa sida qaylada cidlada ah. Intooda badani waxay ku tiirsan yihiin 'nidaamka'. Waxaan u maleynayaa inay tahay waqtigii laga fikiri lahaa: Haddii aadan garaaci karin 'em, ku soo biir' em.
Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan la imaano xalal la taaban karo oo ay sidoo kale soo dhaweyn karaan kuwa u shaqeeya 'nidaamka'. Waa inaan la imaanaa xalal la taaban karo oo macquul ah oo hubinaya in dadku aysan lumin xaqiiqooyinka, laakiin ay iyagu leeyihiin fikrad. Waxaan hadda si buuxda ugu tiirsannahay go'aannada kor ku xusan. Nidaamka siyaasadeed ee hadda jira wuxuu nagu qasbayaa in aan aqbalno go'aannadaas iyada oo aan wax qaab ah looga qaybgelin. Waxaan u maleynayaa in taas si ka duwan loo qaban karo. Runtii taasi waxay ubaahantahay in hada wax laga badalo. Runtii way i xanaajisay.
Waxaan aqriyay fursad aan si fudud ugula wareegi karo waxyaabo isla teknolojiyad la mid ah maalmahan, iyada oo aan taasi jirin in bulshada oo dhan laga leexiyo. Uma baahna kacdoon weyn oo caan ah ama kacaan. Qof kastaa wuu sii wadi karaa wuxuu sameeyo uun. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa aad ka aaminsan tahay arrintaas, maxaa yeelay marwalba waan ka mahadceliyaa aragtidaada.
Waxa kaliya ee isbeddelaya waa qaab dhismeedka go'aanka. Wasiirrada iyo mas'uuliyiinta hadda u warramaya taajka oo ku riixaya sharciyo la'aan iyada oo aan dadku si dhakhso leh u oggolaanin waa inay u soo sheegaan dadka. Wasiirada waa in lagu badalaa wakiilo si toos ah loo soo doortay oo dad ah (kuwaas oo runtii matalaya dadka halkii taajkii laga saari lahaa). Waxay ugu yeedhaan dimoqraadiyad toos ah. Taasi xitaa waxaa dallacsiiyay Elon Musk (oo ka mid ah kuwa gawaarida Tesla). Taasi ma ahan wiil doqon ah…
Haddii taasi ay suurtogal ku tahay dimuqraadiyadda tooska ah iyo haddii si dhakhso ah loo soo bandhigi karo, waxay ila tahay inaan bilowno taas oo aan horumarinno. Dimuqraadiyadda tooska ah ee noocaas ah, dadku waxay ku dooranayaan wakiilada dadka khadka tooska ah ee internetka. Markaa adiga laftaada waad u noqon kartaa musharax ama gacanta waad gali kartaa musharixiinta oo nidaamka codayntu wuxuu hubiyaa xulashada iyo koritaanka taageerada. Waxoogaa waa nidaamyada codeynta sida barnaamijka 'Got Talent' ee Holland iyo barnaamijyada kale ee TV-ga. Teknolojiyadda ayaa jirta. Waxa aan fahmay waa in si dhakhso leh loo suurta gal yahay.
Markaa wakiilada toos loo soo doortay waa inay fududeeyaan shuruucda una soo bandhigaan dadka si ay u ogalaan ama u eegaan. Kumanaan sharciyo ah, ilaa cadeyn, laga bilaabo tiro ilaa tayo. Toos uga qaybgalka dadweynaha. Waxaan u maleynayaa inay taasi caqli badan tahay.
Waan sugi karnaa illaa sharciyada tallaalka ee khasabka ah ay noo oggolaadaan inaan dooranno qaadashada tallaalka ama aan aadno xabsi dijital ah ama aan xoog ku qabsan karno waqtigaas. Waxaan u maleynayaa inaan u baahan nahay inaan ka faa'iideysanno qalalaasahan si isbedelku u dhaco. Beddel habka aan rabno! Dimuqraadiyadda tooska ahi waxay ku beddeli kartaa qaab dhismeedka awoodda jira iyadoo loo marayo nidaamka codbixinta ee internetka dhowr bilood gudahood. Waa hagaag: Ugu dambeyntiina wax la taaban karo oo aan ka ahayn dhammaan fikradaha dhogorta leh ee internetka oo dhan.
Runtii waxaan rabaa inaan ogaado waxa aad ka aaminsan tahay! Waxaan u maleynayaa in hadda la joogo waqtigii loo abuuri lahaa taageero tan. Aynu ka hadalno taas shakhsi ahaan. Waan dhisi karnaa sida aan dhamaanteen Facebook u weyneynay. Taas uun ayaad ku sameyneysaa adiga oo wadaagaya ... tilmaamaya dadka kugu xeeran. Taasi waa sababta aan ugu fikiray inaan kula soo xiriiro.
Halkan ka daawo, si fiican ayaa loogu sharaxay halkaas: https://www.fvvd.nl/ oo isla markaaba waad saxeexi kartaa codsi muujinaya inaan runtii rabno inaan tan wada qabanno. Taasi waa inay ahaato mid faayras ah haddii aad i weydiisatid.
Hagaag, waan kaa maqli karaa adiga.
(PS laga yaabee fikrad: u dir emaylkan saaxibadeena kale)
Waxaa jira su'aalo badan oo ku saabsan sida nidaamka noocan ahi u shaqeyn doono, laakiin xudunta waa:
in si dhaqso leh loo hirgalin karo
in uu yahay qaabka ugu cadaalada badan ee dimuqraadiyadda
in aad mar labaad ka dhigi karto nidaamka maaliyadeed mid adag
Dambe ayaa la samayn karaa, tusaale ahaan, adigoo soo bandhigaya dhisaye dijital ah (iyo suurogal ahaan). Dhismahaas ayaa markaa daboolaya halbeegaas hoos u dhaca lacagta ee hadda jira ka hortagga. Xiriirkaas wuxuu sameynayaa “heerka dahabka” ee cusub. Taasi waxay noqon kartaa dahab dahab ah ama waxay noqon kartaa bitcoin. Waxaad si dhakhso leh u abuuri kartaa lacag dijital ah iyo isku xirka bitcoin (sida "heerka dahabiga ah") sidoo kale si dhakhso leh ayaa loo aasaasay. Waxyaabaha soo socdaa had iyo jeer waxay khuseeyaan wax walba: dadku doortaan.
Inta badan ayaa go'aamiya! Taasina waa quruxda dimuqraadiyadda tooska ah. Dimuqraadiyadda tooska ah waligeed suurtagal ma noqonin ka hor, maxaa yeelay waxay si fudud waqti badan ku qaadan doontaa. Farsamada casriga ah, waxaad si dhakhso leh dadka u sheegi kartaa. Adigoo adeegsanaya app iyo riix batoonka, waxaad u codeyneysaa musharrax oo aad ku riixeyso hal riix batoonka aad ku oggolaatay ama diido soo jeedinta.
"Haa, laakiin taasi suurtagal ma aha, sharci aad buu uga adag yahay arrintaas isla markaana waxaa jira sharciyo aad u badan oo intaas loogu talagalay!Sida saxda ah iyo taasina waa waxa saxda ah ee u baahan in la beddelo. Sidaa darteed hoggaamiyeyaasha cusub waa inay awood u yeeshaan fududeynta, wada-xiriirka si cad oo dadka u qancin karaan. Inta badan had iyo goor waa go'aan.
U ogolow inuu ku dhex jiro, ka fikir, laakiin ha ku dheerayn. Waxaan ubaahanahay inaan si dhakhso leh uga baxno xaalada hada jirta waxaanan ubaahanahay inaan helno dadkii ina xukumay hada si dhakhso ah dhismaha. Ka aqri faahfaahin dheeraad ah www.fvvd.nl oo weydii su'aalahaaga hoosta 'su'aal & jawaab'.
"..Haddiise aad tan iskuxirfurtid carruurteeda ayaa kuxiga doonta"
sawirada isha: https://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/photos/
Hoos u dhaca weyn ee lacagta inta lagu jiro xiisadda corona waxay horseedaa sicir barar: waa xalka bitcoin?
Tags: dhaqdhaqaaqa, dimuqraadiyad, si toos ah, toos ah, featured, Forum, fvvd. xaflad, xirid, bulshada, wasiirrada, online, madal, kacaanka, cod bixin
15 May 2020 ee 15: 27
ANP: Poll: VVD wuxuu u kordhay 43 kursi iyadoo loo marayo habka corona
Codbixiyeyaashu waxay bogaadiyeen nidaamka corona ee dawladda, kaas oo si gaar ah taageero ugu siiya xisbiga isbahaysiga ugu weyn ee VVD, sida lagu sheegay sahanka ugu dambeeyay ee I&O Research. Xisbiga samafalka wuxuu ku xisaabtami karaa 43 kursi oo toos ah, halka xisbiyada kale oo dhami ay ka hoos imanayaan 16 kursi.
15 May 2020 ee 15: 29
ANP John de Mol… cod bixin la isku halleyn karo ama dacaayad? Waqti badan in la caddeeyo waxa ka soo horjeedda.
15 May 2020 ee 15: 42
nidaamka codeynta oo dhan ma aha in lagu kalsoonaan karo markay yiraahdaan 43 kursi kaliya waxay u qaadanayaan inay awoodaan inay helaan tirada kuraasta 43. Inta badan dadka deggan Madurodam weli waxay aamisan yihiin habka codeynta iyo sanduuqa codbixinta.
Hagaag waxaan kuu sheegayaa ilo lagu kalsoon yahay oo ah inuu jiro khayaanada sanduuqa codbixinta oo aysan ka fiicneyn celceliska celceliska jamhuuriyadda. ANP sidoo kale waxay ku lug leedahay tirinta codadka
Degmooyinku waxay u gudbiyaan wadarta tirada degdega ah ee ANP (Algemeen Nederlands Persb Bureau). Iyada oo ku saleysan wadarta guud ee codbixinta, NOS ayaa soo bandhigi doonta natiijooyinka hordhaca fiidka maalinta doorashada.
“Mas’uuliyiinta degmadu waxay kordhiyaan natiijada goobta codbixinta. Waxay tan ku sameeyaan iyaga oo ku saleynaya warbixinnada rasmiga ah ee xarumaha cod-bixinta. Natiijooyinka waxaa lagu daray caawinta aaladda xisaabinta (inta badan Taageeridda Doorashooyinka Software), labadaba heerka xisbiga iyo heerka murashaxiinta. ”
15 May 2020 ee 15: 55
Joseph Stalin - 'Kuwa iyagu codeeya go'aan kama gaadhaan. Kuwa tiriya codbixinta ayaa go’aamiya wax walba.
15 May 2020 ee 16: 07
Waxaan u maleynayaa in Mol uu wali saaxiib yahay ama ugu yaraan uu ganacsi la wadaago Berlusconi. Freemasons dhexdooda dhexdooda, waxay si wada jir ah u dhisaan mustaqbal ifaya naftooda iyo walaalohooda, ee aan ahayn aadanaha.
16 May 2020 ee 09: 10
Waxaa loo yaqaan 'benne kabbalists', Berlusconi waxaa lagu yaqaanaa inuu xubin ka yahay hoyga PII ee caanka ku ah. Isla hoygaas oo ku lug lahaa qorshaynta hawlgallada Gladio ee ka dhacay dalka Talyaaniga kaas oo lagu dilay daraasiin dad ah dambiilayaal "Brigade Red". Had iyo goorba way yaqaanaan sida saxda ah ee ay u xirxiraan una iibiyaan tuhmanayaasha caadiga ah.
16 May 2020 ee 13: 51
Freemasonry Waxaa Go'ay Bulshada Reer Galbeedka
Dad badan oo muhiim u ah go’aamada reer galbeedka, siyaasiyiinta, dhaqaaleyahannada, iyo saraakiisha milatariga waxay labaduba xubin ka yihiin bulshada qarsoodi ah ama waxaa saameyn ku leh oo had iyo jeer gacanta ku haya xubnahan oo kale… Kani waa isla qaabdhismeedka shaydaanka adduun weynaha oo aan ka ogaanno qaar ka mid ah guryaha Freemasonry, sida PII. Lodge wuxuu lug ku lahaa arrimaha Calvi ee dalka Talyaaniga horaantii qarnigii XNUMXaad - qarsoodinimada, labalaabashada, ku shaqeynta saameyn aan caadi aheyn, dhexgalka musuqmaasuq, musuqmaasuq ee saraakiisha iyo, meeshii loo baahdo, waxay umuuqataa, xitaa dil.
22 May 2020 ee 14: 43
22 May 2020 ee 17: 16
15 May 2020 ee 19: 08
Haddii aad rabto inaad hoggaamiye u noqoto koox ballaadhan, waxaad u sameysaa si daneysi ah oo aadan u isticmaalin (digital) lacag. Isla markii lacagtu soo wareegto, waxyaabo qaldamaan. Dowladaha hada jira waxay iska dhigayaan inaysan kasbanin, laakiin albaabka dambe waa sheeko gebi ahaanba ka duwan.
Siinta dadka lacag la’aan lacag la'aan maahan inay caawiso, lacagtu waxay siisaa tamar meesha waqti lagu qaato. Maaddaama ay yihiin dhallinyarro raacsan waxay u qaylinayaan wax badan.
Wax kasta oo dunida ku nool waxay u kobcaan si bilaash ah sharciyada dabeecadduna waa isku mid. Bini-aadamka iyo hogaamiyayaasheeda ayaa ku badalay sharciyadan sharciyada dhaqaalaha.
Qof kasta oo dunidan ku nool wuxuu xaq u leeyahay inuu yeesho oo uu beero dhul. Waxaa jiri doona cunto aad u badan oo ay aad u badan yihiin oo qofna gaajoon doonin.
Looma baahna in la jaro koritaanka dhaqaalaha. Hadaad rabto inaad aado wadan kale, waxaad sameyneysaa heshiis aad wax isku dhaafsan karto in mudo ah. Kobaca dhaqaale waa bulsheed, koboca dhaqaalaha ayaa ah is-jeclaan.
Qof walba wuxuu xiiseeyaa shaqadan sii socota, maxaa yeelay waan ognahay waxa dhici doona haddii aan iska dhiibno.
Xusuusnow tani waxay dhacday kahor 😉
15 May 2020 ee 20: 10
Waxaan u malaynayaa inay tani tahay figrad fiican. Fadlan ku taagee qalbigaaga.
Hayso labo su'aalood:
Sidoo kale miyaanad nidaamkan u adeegsan karin dimuqraadiyadda tooska ah iyada oo loo marayo afti laga qaado?
Sideed ku hubin kartaa in nidaamkani yahay mid la isku halleyn karo oo aan la adeegsan karin?
Aniguba kuma lihi lacagta dijitaalka ah ama dijitalka bulshada guud ahaan.
Nidaamkan ayaa sidoo kale lagu adeegsan karaa qaab "isu eg" badan?
16 May 2020 ee 21: 57
Dhammaan indha indheynta iyo qiimaha wanaagsan ee faallooyinka. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan ficilcelin ama warqaddu sida ku qoran qodabkan oo warqadda mar hore ma la koobiyeeyay oo loo gudbiyay kuwa kale? Haddii aad hayso wax kale oo talo ah ama laxiriira warqadda ama aad gaartid kooxda bartilmaameedka ah, haka labalabeynin inaad la wadaagtid. Tani waa hawl yar, oo sida fayrasku ugu faafo si dhumuc ah, dhambaalkan ayaa sidoo kale faafi kara. Jawaab celinno badan oo laga helo goobaha kale ee la xakameeyo) waxay muujinayaan in dareenka mustaqbal ee dad badani ay doonayaan in la beddelo. Sidaa darteed hadda waa waqtigii la qaban lahaa kooxdan kanaalka kale. Nuqulka warqadda iyo u qeybinta su'aasha si aad u sii wadaagtid waa hal dariiqo. Sidoo kale, "wargeyska kale" ayaa loo qaybiyey Maalinta Xorriyadda, taas oo xitaa nooc daabacan ah. Waxaan rajeynayaa in 930-kii qof ee saxeexay codsiga ay sidoo kale koobiyeen warqaddan oo ay u sii qaybiyeen kuwa kale.
16 May 2020 ee 23: 06
Oggolow, hadda waa wakhtigii la qaban lahaa ficil oo si firfircoon kor loogu qaado. Tan kama soo baxno annagoo ka jawaabeyna maqaallada oo keliya, laakiin inaan runtii dhiirrigelino dadka.
16 May 2020 ee 22: 11
Kaliya dhig halkan, waxaad la fadhidaa saamaynta chimerickaaga, laakiin waad hore u ogayd taas. Hoos ka eeg.
Intaa waxaa sii dheer, Gilecaad mar kale waa shay laga soo qaatay Cibraaniga. Waxay umuuqataa inay ula jeedo kuwan soo socda.
Gilecaad (waa abuuraha asluubta, tallaalka Trump wuxuu doonayaa in 300 milyan oo tallaalka ah ay soo qaataan millatariga) Marka waxaad ku sugan tahay loop, maxaa yeelay waxba waxba lagama tijaabin, dhab ahaan looma sameynin ujeeddooyinka ugu wanaagsan. iyo hoos ka tixraac.
Heat of markhaati chaldee magac u dhiganta Galeed oo ku qoran Cibraaniga. Labaduba waxay calaamad u yihiin goobjoog ka ahaanshaha Yacquub iyo Laabaan. Gen 31:47 (maahan in lagula taliyo dadka Kitaabka Quduuska ah, laakiin waa in la tarjumo)
Pope Francis Encyclical Laudato Si (warqad waxbarid) Baaqa gawraca 6 bilyan oo qof;
Ujeedadu waa mid curyaan ah iyadoo wajigiisa lagala kulmayo shirqool si weyn u rumeysan waaya inuu sixi karo. Sodomit, Footiyoliim, 33 digrii Freemason. J Edgar Hoover, madaxa FBI.
Shirqool noocee ah?
Kala beddelasho waa halka ay rabaan inay ku qaataan, ee maaha inay guursadaan.
Marka way fududahay in la arko sida ay dadkaasi xun yihiin, haddii aad ugu yeedho taas.
18 May 2020 ee 22: 57
Sida "De Andere Kranr" loo daabacay oo loo qaybiyay nuqul daabacan oo ka jira Nederland, wargeys ayaa sidoo kale lagu daabacay Jarmalka kaas oo mucaaradka looga aqrin karo tilaabooyinka hadda.
Faafinta wararka noocan ah waxay runtii ka caawin doontaa dad badan inay la kulmaan cadaadis yar marka ay arkaan dareenkooda mustaqbalkooda oo la xaqiijiyay illaa xad ka weyn sidii ay markii hore ku fikireen. Dabcan tani waxay sidoo kale noqon kartaa dariiqa qabashada kooxdan dadkan, laakiin waxaa jira wax nool oo ka dhex jira koox dad ah oo sii kordhaya. Taasi waa sababta ay hadda lagama maarmaan u tahay in la dhiirrigeliyo dadaallo dimoqoraadiyad toos ah laga dhex abuuro dad tiro badan. Tani waxay u baahan tahay qof kasta oo akhrinaya tan inuu koobi kaqoro warqadda oo uu u gudbiyo, tusaale ahaan, 10 cinwaan oo ku yaal goobaabtaada aasaasiga ah su'aasha haddii ay sidoo kale doonayaan inay gudbiyaan warqadda. Markay taasi dhacdo waxay noqotaa koritaan lama huraan ah oo ku saabsan ka warqabka isbedelka / bedelka sida dimoqraadiyada tooska ah. Aqoonta loo leeyahay waa tallaabada koowaad ee tallaabada dadku qaadaan, maadaama dad badan oo suuqleyaal ahi ay caddeyn doonaan.
Isweydii, damaca dib ugu laabashadii caadiga ahayd waa inaanu mar dambe suurogal noqonin maxaa yeelay nidaamku wuxuu fursad u helay inuu bulshada ku dhex wareego xaalad aan hadda ku jirno. Marka fadlan fikirkaan maskaxdaada ka saar. Xulashada ayaa ah sidaas darteed inaan aqbalno caadika cusub ee aan hadda la kulmi karno oo aan ku aqrin karno taleefanka moobaylka ama aan soo dhaweyn karno oo aan noqon karro lambar 5, 15, 500, 50000 ama 1 milyan oo ah "sida loo abuuro dhaqdhaqaaq".
Tallaabo yar maanta qaado oo arag inta qof ee aad gaari karto. U yeel jiilka da 'yarta ah iyo carruurtooda mustaqbalka iyo ayeeyooyinka !!! Marka: https://www.fvvd.nl
20 May 2020 ee 14: 50
Ayaa saxeexa sharciyada iyo Go'aannada Boqortooyada?
Soojeedinta sharci-dejinta ee ay aqbalaan baarlamaanka iyo go'aannada boqornimada waxaa wada saxeexay (heshiis la galay) King ka dibna waxaa mas'uul ka ah wasiirka mas'uulka ka ah ama xog hayaha. Kadibna way dhaqan galaan. Calaamadda heshiiska waxay muujineysaa in uusan ahayn Boqorka laakiin wasiirka uu yahay (siyaasiyan) mas'uul ka yahay
Willy tog ayaa taasi mar kale qabtay…
20 May 2020 ee 18: 54
Xaqiiqdii, inay si xariifnimo leh ugu soo darsadeen dastuurka, ayna isla taliyaan isla ragga dabcan.
Waxay u baahan yihiin midba midka kale wayna wada shaqeeyaan, laakiin dadka caadiga ah looma sheego dabcan. waxay leeyihiin xiriir gaar ah oo adag oo midba midka kale ka dhexeeya.
Halkee ayuu jiraa, kan kalena waa. Weli way fiicantahay sidii boqor inaan bixin cashuurta, qadarinta raasamaal iyo awooda, sidoo kale howshaada ayaa laga dhaxlay. Looma baahna in la dalbado si markaa musharraxiinta ugu fiican aysan u istaagin fursad. Ka dib waxaa sidoo kale lagu dhiirigeliyay inay go'aan ka gaadhaan ballamaha ay kuwa magacowday dhab ahaantii wakiilkiisa u yihiin, waana kuwo isaga u adeega. yaa boqorka u xukuma xaaladdan oo kale? Taasi waa sababta ay u jiraan taageerayaal badan oo oranji ah. Hagaag ayey ku kacaysaa in la noqdo taageere oranji Orange waxay ahaan jireen xisbi siyaasadeed oo iyagu waliba si xariifnimo leh u joojiyeen si boqorka uu u noqdo mid dhexdhexaad ah. Hadday tahay ?? . Nidaamka feeraha ee qarniga 21aad. Ka takhalus. Saxiix arjiga hadda!
Hanjabaada bambaanooyinka ayaa qoray:
20 May 2020 ee 21: 05
Runtii, tani waxay noqon lahayd hab dhakhso ah oo wax looga qabto - haddii la helo taageerayaal ku filan. Aniga waxay ila tahay inay qaadataa wax ka badan ujeedada la sheegay ee codsiga.
Xaqiiqdu waxay tahay in tani ay sidoo kale ku saleysan tahay muuqaalka muuqaalka go'aan wadaaga. Sikastaba, dimoqaraadiyada ayaa had iyo jeer dulmisa dadka laga tirada badan yahay ee aan helin "jidkooda". Intaa waxaa sii dheer, dimuqraadiyadda tooska ahi sidoo kale waa khatar haddii warbaahintu dhexdhexaad noqoto. Hadana kan dambe sax maahan kiiska Nederland.
Tusaalaha sida ay wax u qaldami karaan waxaa lagu arki karaa taxanaha "The Orville" xilli 1 dhacdada 7. Kaliya maadaama ay tahay taxane '' il weyn '' macnaheedu maahan in uusan ku koobnaan karin farriin faa iido leh…
Aniga, sidoo kale, waxaan shaki ka qabaa in mashiinka korontada uu iska kaashan doono si kasta haddii codadka ku filan la qaato, laakiin waa wax fiican. In la toogto runtii waa khalad. Si kastaba ha noqotee, waxay dareemeysaa wax qariib ah inay saxeexaan codsi. Waa wali dareenka ah inaad garaneyso in dadku awood kuu leeyihiin oo aadan waxba sameyn karin la'aantood. Hadaad qirato taas, maxay dadku ugu jawaabayaan codsigaaga… ..
20 May 2020 ee 22: 26
Codsigu waa wax aan ka ahayn baarista sida dad badani diyaar u yihiin inay bilaabaan oo u muujiyaan go'aankooda. Dabcan waxaa loo soo bandhigaa neiamdn laga bilaabo siyaasada hada jirta, laakiin saxeex ku filan waxay calaamad u tahay: "Hadana waxaan u baxaynaa" dhanka nidaamka siyaasadeed ee hadda jira.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo, dabcan, waa dib-u-eegis adag oo ku saabsan waxa tubbada ku jira. Taasi waa wax aan caqli gal aheyn maxaa yeelay waxaad meesha ka saaraysaa qabatinka dadka isla waqti isku mid ah, laakiin hadda ama weligeed ma arki doonno imisa qof ayaa diyaar u ah inay runtii aadaan meesha ugu sarreysa isbedelka
Waad ka hortagi kartaa inay khalad dhacdo. Tusaale: tallaalka qasabka ah. Ka soo qaad in intooda badani ay rabaan tallaal khasab ah sababta oo ah waxay saameyn ku yeesheen warbaahinta oo xitaa waxay rumaysteen inuu fiicanyahay. Sharcigaasi wuxuu ka hor imanayaa dastuurka. Dastuurkani wuxuu leeyahay xeerar aasaasi ah oo ku saleysan xorriyadda iyo xaq u lahaanshaha go'aan-gaarista. Sidaas darteed waa inaadan (oo ku dhicin sharciga hadda jira) inaad meel mariso sharciyada carqaladeeya ama iskudaya inaad ku wareejiso dastuurka (oo ku saleysan xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha).
20 May 2020 ee 22: 44
Kuwa wax akhriya isla markaana runtii raba isbedel carruurteenna iyo carruurtooda. Waxaad u badan tahay inaad saxeexday codsiga, laakiin taasi micnaheedu maahan inay tahay isbeddelka. Miyaad diyaar u tahay inaad wax sameyso oo aadan kaliya la wadaagin maqaalada iyo fiidiyowyada in ka badan ama ka yar oo xaqiijin ah wixii horey loo ogaa. Suurtagal ma tahay in la bixiyo "dhaqdhaqaaqa" xoogaa walax dheeraad ah iyada oo ah, sameynta sheeko fiidiyoow ah oo waxyaabaha si dhakhso leh looga wada hadli karo iyo meesha, tusaale ahaan, waxaan u kala qaybinaa hawlaha si dhab ahaan loo sameeyo waxyaabaha kicinaya isbedelka dhabta ah. Mise waxaa jira talooyin kale oo ku saabsan sidii loo gaari lahaa koox bartilmaameed weyn leh. Waxaa jira dad badan oo geesi ah (oo uu ku jiro Martin) oo lagu muujiyey fiidiyowyada leh awooda inay magaca u magacowaan. Waxaa la joogaa waqtigii aan isku muujin lahayn dadkaas isla markaana aan la wareegi lahayn buundada. Waxay mudan yihiin in la taageero taasina waxay u baahan tahay in laga tago fikirka qalbiga. Marka waxaan soo jeedinayaa inaan sameeyo sheekeysi fiidiyoow ah, laakiin su'aalaha z2:
* kuwa doonaya inay kaqeyb galaan
* waxaa jira talooyin kale
waan aqrin doonaa waxa jawaab celintu ay tahay
20 May 2020 ee 23: 03
Runtii waxaan rajaynayaa in dadku howshan bilaabaan. Wada sheekaynta fiidiyowga waxay noqon kartaa waxoogaa wax tar ah, sababtoo ah waa inaad isla markaa ahaataa khadka tooska ah, laakiin waxaad ku abuuri kartaa dhaqdhaqaaq adoo istaagaya naftaada oo bayaano cad bixinaysa. Xaqiiqdii waad sameyn kartaa fiidiyoow oo halkan ayaad ku dhajin kartaa. Ka dibna dabcan annagu uma jeedsanno ciidanka warbaahinta bulshada ee gobolka (oo sidoo kale loo yaqaan 'troll Army'). Soo qaado fikradaha iyo gaar ahaan ficil la taaban karo.
Bilowga muhiimka ahi wuxuu ahaan lahaa haddii dadku bilaabaan wadaagida websaydhka oo runtii isku dayaan inay dadka kale ka dhaadhiciyaan.
21 May 2020 ee 09: 01
21 May 2020 ee 15: 05
bertusjanssen ayaa qoray:
21 May 2020 ee 15: 06
« Masruufka ka dhanka ah Arimaha Dowlada Jordie Zwarts ayaa lagayaabaa tan, laakiin wax guul ah ma gaaro
Miyay adkaanta Trump ee Shiinaha ku wajahan bilowga dhicitaanka doolarka iyo burburka dhaqaalaha? »
Wadarta booqashooyinka: 2.464.103